မိန်းမသားတို့ အတွက် သန္တာလှိုင် ရေးထားတဲ့ အဖိုးတန်စာစု – PAPAWADY
Posted on October 9, 2017 by papawady
မိန်းမသားတွေအတွက် မှတ်သားဖို့ ကောင်းတဲ့ သန္တာလှိုင် ရဲ့ စာစုလေးကို ပပ၀တီ က ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သန္တာလှိုင် က ဒီစာ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ လ ၁၀ ရက်နေ့ က ရေးခဲ့တာပါ။ သန္တာလှိုင် ဟာ သူ့ ဘ၀အတွက် အဖော်မွန် နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နဲ့ ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ပရိသတ်ကြီး ။မိန်းမတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်က ကျွန်မအနေနဲ့ အခု သေချာတာကတော့ လုံခြုံမှုလို့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။အခုတော့ ကျွန်မဘဝလေးက လုံခြုတယ်လို့ ခံစားနေရပါပြီ။ အားကိုးတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အရင် ဖွင့်ပါရစေနော်….. အားကိုးအားထိုက်တယ် ဆိုတာ ဝင်ငွေရှာပြီး မိန်းမကို အကုန်အပ် လိုလေသေးမရှိအောင် ထားနို်တာက်ု ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ လူဦးနဲ့ တစ်ဦး လိုအပ်ချက်တွေ စိတ်ဓာတ်တွေ ယုံကြည်မှူတွေ မတူသလို အားက်ိုးရတဲ့ နေရာမှာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လူမှူရေးရာ စီးပွားရေးရာ တွေမှာလဲ တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ လက်တွဲလို့ တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာ ရမယ် ဆိုတဲ့ လုံခြုံမှူကို ပေးနိုင်ရင် အားကိုးရတယ် လို အကြမ်းဖြင်း သတ်မှတ်ကြပါစို့….
မိန်းမ ဆိုတာ အားကိုးချင်လို့ ယောက်ကျားကို အဖော်အနေနဲ့ လက်တွဲကြတာ များတယ်လေ။ ကျွန်မလဲ မိန်းမသားပါ အာကိုချင်လို့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ဖြစ်သွားတတ်တာက ယောက်ကျားကို အားကိုးချင်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ယူထားပေမယ့်လဲ ငယ်တုန်းက တစ်ယောက်ထဲ နေရမှာ ကြောက်တာလေး တစ်ခုကြောင့်.. တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်တယ်လို့ ထင်ပြီး ယူလိုက်တာလား?ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောမှာ ကြောက်လို့ သူက ကိုယ့်အတွက် မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ၂ ယောက်စလုံး ရဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းပြီး ဆက်လက်ပြီ ကုပ်ကပ်နေဖြစ်တာ လား? ဒါ၊မှ မဟုတ် လက်ရှိအခြေအနေကနေ ပြန်နောက်ဆုတ် သုည ကနေ သို့မဟုတ် အနုတ်ကနေ ပြန်စ ရမှာကြောက်လို့ ဆက်ပြီး ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလား?သို့မဟုတ် သားသမီတွေကြောင့် လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ မျိုးစုံနဲ့ တကယ်အားလဲ မကိုးရတောတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ညှစ်ကပ်သတ်ပြီး နေနေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တရားမျှတရဲ့လားလို့ စပြီး သုံးသတ်တတ်လာတဲ့ အချိန်က ကျွန်မ တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်တော့ပဲနဲ့ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။အပြစ်ဆိုတာ အခြားလူကို တင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး သုံးသတ်ဖို့လို့ မြင်ပါတယ်။ အားကိုးချင်ရင် တကယ်အားကိုးထိုက်တဲ့ လူမျိုးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ မိန်းမ ဖြစ်နေရမယ်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတတ်တဲ့ မိန်းမဖြစ်မှ ရမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။လူတိုင်းတော့ ဒီသဘောတရားကို ကျွန်မနဲ့ သဘောတူချင်မှ တူမယ်။ ကျွန်မကတော့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှူပဲ လို့ ခံယူတယ်။အားမကိုးရတာကို သူများကို အပြစ်မတင်ပဲနဲ့ ကိုယ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်လို့။ လူဆိုတာ အချိန်နဲ့ အမျှ တိုးတက် ပြောင်းလဲနေသင့် ပါတယ်။ ကိုယ်ရော သူရော ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ အမျှ အားကိုးရတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ကလဲ ပြောင်းလဲနေမှာမို့ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် စလုံးသာ အတူ တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေနို်င်မယ် ဆိုရင် တစ်သက်စာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ငြီးငွေ့ဖို့ အခွင့်အရေး မရှိတော့ဘူးလေ။
မိနျးမသားတှအေတှကျ မှတျသားဖို့ ကောငျးတဲ့ သန်တာလှိုငျ ရဲ့ စာစုလေးကို ပပဝတီ က ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။ သန်တာလှိုငျ က ဒီစာ ကို ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာ လ ၁၀ ရကျနေ့ က ရေးခဲ့တာပါ။ သန်တာလှိုငျ ဟာ သူ့ ဘဝအတှကျ အဖျောမှနျ နဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျနဲ့ ရုံးတကျလကျမှတျထိုးခဲ့ပါတယျ။ ဖတျကွညျ့လိုကျရအောငျနျော ပရိသတျကွီး
မိနျးမတှရေဲ့ လိုအပျခကျြက ကြှနျမအနနေဲ့ အခု သခြောတာကတော့ လုံခွုံမှုလို့ပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ။
အခုတော့ ကြှနျမဘဝလေးက လုံခွုတယျလို့ ခံစားနရေပါပွီ။ အားကိုးတယျ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို အရငျ ဖှငျ့ပါရစနေျော….. အားကိုးအားထိုကျတယျ ဆိုတာ ဝငျငှရှောပွီး မိနျးမကို အကုနျအပျ လိုလသေေးမရှိအောငျ ထားနျိုတာကျု ဆိုလိုတာ မဟုတျဘူးနျော။ လူဦးနဲ့ တဈဦး လိုအပျခကျြတှေ စိတျဓာတျတှေ ယုံကွညျမှူတှေ မတူသလို အားကျိုးရတဲ့ နရောမှာ စိတျဓာတျရေးရာ လူမှူရေးရာ စီးပှားရေးရာ တှမှောလဲ တူမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျနဲ့ လကျတှဲလို့ တဈသကျလုံး စိတျခမျြးသာ ရမယျ ဆိုတဲ့ လုံခွုံမှူကို ပေးနိုငျရငျ အားကိုးရတယျ လို အကွမျးဖွငျး သတျမှတျကွပါစို့.မိနျးမ ဆိုတာ အားကိုးခငျြလို့ ယောကျကြားကို အဖျောအနနေဲ့ လကျတှဲကွတာ မြားတယျလေ။ ကြှနျမလဲ မိနျးမသားပါ အာကိုခငျြလို့ အိမျထောငျပွုခဲ့ တာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အမြားအားဖွငျ့ ဖွဈသှားတတျတာက ယောကျကြားကို အားကိုးခငျြလို့ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ယူထားပမေယျ့လဲ ငယျတုနျးက တဈယောကျထဲ နရေမှာ ကွောကျတာလေး တဈခုကွောငျ့.. တဈကိုယျကောငျး ဆနျတဲ့ စိတျနဲ့ ဒီတဈယောကျကိုပဲ ခဈြတယျလို့ ထငျပွီး ယူလိုကျတာလား?ဒါမှမဟုတျ ပတျဝနျးကငျြက ပွောမှာ ကွောကျလို့ သူက ကိုယျ့အတှကျ မကောငျးတော့ဘူးဆိုတာ သိသိကွီးနဲ့ ၂ ယောကျစလုံး ရဲ့ အခြိနျတှကေို ဖွုနျးပွီး ဆကျလကျပွီ ကုပျကပျနဖွေဈတာ လား? ဒါ၊မှ မဟုတျ လကျရှိအခွအေနကေနေ ပွနျနောကျဆုတျ သုည ကနေ သို့မဟုတျ အနုတျကနေ ပွနျစ ရမှာကွောကျလို့ ဆကျပွီး ဆယျဖို့ ကွိုးစားနတောလား?
သို့မဟုတျ သားသမီတှကွေောငျ့ လို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှေ မြိုးစုံနဲ့ တကယျအားလဲ မကိုးရတောတဲ့ အခြိနျမှာ ဖွဈညှဈကပျသတျပွီး နနေတော ကိုယျ့ကိုယျကို တရားမြှတရဲ့လားလို့ စပွီး သုံးသတျတတျလာတဲ့ အခြိနျက ကြှနျမ တဈကိုယျကောငျး မဆနျတော့ပဲနဲ့ ဖွဈသငျ့ ဖွဈထိုကျတဲ့ အနအေထားတဈခုကို ပွောငျးဖို့ ကွိုးစားတော့တာပါပဲ။အပွဈဆိုတာ အခွားလူကို တငျဖို့ မဟုတျပါဘူး သုံးသတျဖို့လို့ မွငျပါတယျ။ အားကိုးခငျြရငျ တကယျအားကိုးထိုကျတဲ့ လူမြိုးကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျတဲ့ မိနျးမ ဖွဈနရေမယျလေ။ ကိုယျ့ကိုယျကို သိတတျတဲ့ မိနျးမဖွဈမှ ရမယျလို့ ကြှနျမယုံကွညျပါတယျ။လူတိုငျးတော့ ဒီသဘောတရားကို ကြှနျမနဲ့ သဘောတူခငျြမှ တူမယျ။ ကြှနျမကတော့ ဘယျသူမပွု မိမိမှူပဲ လို့ ခံယူတယျ။
အားမကိုးရတာကို သူမြားကို အပွဈမတငျပဲနဲ့ ကိုယျနဲ့သာ ဆိုငျပါတယျလို့။ လူဆိုတာ အခြိနျနဲ့ အမြှ တိုးတကျ ပွောငျးလဲနသေငျ့ ပါတယျ။ ကိုယျရော သူရော ပွောငျးလဲလာတာနဲ့ အမြှ အားကိုးရတယျ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျတှေ ကလဲ ပွောငျးလဲနမှောမို့ နှဈဦး နှဈဘကျ စလုံးသာ အတူ တိုးတကျပွောငျးလဲ နနျေိုငျမယျ ဆိုရငျ တဈသကျစာ တဈယောကျကို တဈယောကျ ငွီးငှဖေို့ အခှငျ့အရေး မရှိတော့ဘူးလေ.
Posted in သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged သန္တာလှိုင်